Ghana iyo Ivory Coast oo u soo baxay Semi Fiinalaha Koobka Qaaradda Afrika | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Ghana iyo Ivory Coast oo u soo baxay Semi Fiinalaha Koobka Qaaradda...
Ghana iyo Ivory Coast oo u soo baxay Semi Fiinalaha Koobka Qaaradda Afrika
Xulka qaranka maroodiyaasha ee Ivory Coast ayaa iska xaadiriyay wareega afar dhamaadka koobka qaramada Afrika kadib guul wayn oo ay ka gaadheen xulka qaranka Algeria. Ivory Coast ayaa guushan muhiimka ah ku gaadhay 3:1, waxaana goolasha u kala dhaliyay Wilfried Bony oo laab gool dhaliyay iyo Gervinho oo goolka kale raacsaday.
Xulalka qaramada Ivory Coast iyo Algeria ayaa kulan adag oo xiiso badani dhemaray kulankaas ayaana ahaa kulankii guu danbeeyay wareega sideed dhamaadka koobka qaramada Afrika ee 2015. Ivory Coasta iyo Algeria ayaa ku tartamayay xulkii u soo bixi lahaa wareega afar dhamaadka koobka qaramada Afrika ee soo raaci lahaa xulalka qaramada DR Congo, Equatorial Guinea iyo Ghana oo u soo baxay wareega afar dhamaadka.
Kulankan ayaa ahaa mid adago oo ay xamaasad badani ku dheehnayd isla markaana wuxuu ahaa kulan la sii sugaayay.Algeria ayaa fursadihii ugu horaysay heshay balse halista ugu badan waxaa abuurtay bilawgii ciyaarta Ivory coast, waxaana daqiiqadii 24 aad Algeria birta u garaacay Aurier kaas oo ku sigtay inu Ivory Coast goolka furitaanka u dhaliyo.
Laba daqiiqo oo kaliya kadib markii ay Ivory Coast birta garaacday ayuu Wilfried Bony xulka qarankiisa Ivory Coast u dhaliyay goolka furitaanka, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Ivory Coast hogaanka kula wareegtay.Kubbad uu dhinaca midig oo fog ka soo tuuray Max-Alain Gradel ayuu saxiixa cusub ee Man City si layaableh madaxa ugu dhaliyay.
Qaybta hore ee ciyaarta ayay Ivory Coat ciyaar ahaan iyo natiijo ahaanba u fiicnayd, qaybta hore ee ciyaarta ayaana ku dhamaatay 1:0 ay Ivory Coast hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay markiiba Algeria bilawday inay ka dagaalanto goolka qaybtii hore looga hormaray, waxayna daqiiqadii 50 aad ee bilawgii qaybtii danbe ay la timid goolka barbaraha waxaana goolkaas u dhaliyay Hilal Soudani, waxayna ciyaartu isku badashay barbaro 1:1 ah.
Ciyaarta ayaana dib ushidantay, waxayna laba xul qaranba bilaabeen inay guusha raadiyaan. Daqiiqadii 66 aad ayay Algeria ku sigtay inay hogaanka ciyaarta qabato kadib markii uu fursad dahabi ah ka qasaariyay Soudani, waxaana fursadaa oo gool loo fishay badbaadiyay goolhayaha Ivory Coast.
Algeria ayaa lagu ciqaabay fursada ay ka faa’iidaysan wayday waxaana laba daqiiqo kadib goolka labaad ee Ivory Coast ka dhaliyay ila xidigii goolka hore udhaliyay ee Wilfried Bony, kaas oo kubbad laaga xorta ah oo uu soo tuuray Yaya Toure xulka qarankiisa ugu dhaliyay goolka labaad, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:1 ay markale Ivory Coast hogaanka kula wareegtay. Bony ayaa muujiyay tayada ay uu leeyahay ee ay Man City lacagta badan uga soo bixisay.
Algeria oo raadinaysa goolka barbaraha ayuu Gervinho dhamaadkii ciyaarta xulka qarankiisa udhaliyay goolka dhulka jiiday Algeria, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3:1 oo ay Ivory Coast hogaanka u hayso. ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:1 ay Ivory Coast ugu soo baxday wareega afar dhamaadka koobka qaramada Afrika.